Ahlu-Sunna oo baaq culus u dirtay DF Soomaaliya, ”Dowladda ha fuliso heshiisyadii aynu wada galnay” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ahlu-Sunna oo baaq culus u dirtay DF Soomaaliya, ”Dowladda ha fuliso heshiisyadii...
Muqdisho (Halqaran.com)- waxaa weli si buuxada xall looga gaarin dhismaha dowlad Goboleedka Galmudug oo haatan qorshihiisu wado dowladda Federaalka ayaa Magaalada Dhuusamareeb waxaa ka dhacay kulamo u dhexeeyay Hoggaanka Ahlusunna iyo xubno ka socoday dowladda Faderaalka Soomaaliya.
Xildhibaan Shaacir oo ka mid ah Xildhibaanadii Baarlamaanka Galmudug ee waqtiga xilheyntooda ka dhamaaday kana soo galay dhanka Ahlusunna oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxaa uu sheegay in Ahlusunna ay dooneyso in la fuliyo heshiiskii ay la gashay dowladda Federaalka, kaasi oo ahaa in Baarlamaanka Cusub ee Galmudug laga siiyo 35 Xildhibaan.
Isaga oo sii hadlaayay ayuu sheegay in aysan jirin cid aan Ahlusunna aheyn oo Ciidan iyo hub ku wareejisay dowladda Federaalka Soomaaliya, wuxuuna xusay in heshiiskii ay la galeen dowladda uusan kaliya aheyn wax ku Kooban Warqad ee ay tahay wax xaqiiqa ah oo bulshada wada ogyohiin.
waxa uu hadalkan ku soo aadayaa xilli ay Magaalada Dhuusamareeb kulan ku yeesheen xubno ka socoday dowladda Faderaalka Soomaaaliya iyo Ahlusunna, iyagoona ka wada hadlay dhismaha Galmudug, waxaana Ahlusunna ay u sheegeen in la fuliyo heshiiskii ahaa in 35 Xildhibaan laga siinayo Baarlamaanka Cusub ee Galmudug.
Ahlu-Sunna oo baaq culus u dirtay DF Soomaaliya